Aragti: Yaa Ku Guuleysan Doona Champions League Habeen Danbe, Bayern Munich Mise Chelsea? - jornalizem
Aragti: Yaa Ku Guuleysan Doona Champions League Habeen Danbe, Bayern Munich Mise Chelsea?
Bilowgii xilli ciyaareedkan cidna ma sadaalineynin in Bayern Munich iyo Chelsea ay isagu imaan doonaan finalka koobka ugu qiimaha badan kooxaha yurub ee Champions League.
Labada kooxood ayaa ka soo talaabsaday labadii kooxood ee loo sadaalinayay inay finalka isla tagi doonaan Barcelona iyo Real Madrid, Bayern Munich waxa ay rigoorayaal kaga soo talaabsatay Los Blancos, halka Chelsea ay si geesinimo leh ku soo martay semi-finalkii kooxda Blaugrana.
Riyada Bayern Munich ee ah inay koobkaan ku qaadaan garoonkooda waxa ay aheyd mid qorshaha ugu jirtay ka hor inta uusan bilaaban xilli ciyaareedkan.
Halka bilyaneerka Russia ee iska leh Chelsea Roman Abramovich uu indhihiisa ku hayay koobkan tan iyo markii uu kooxda iibsaday 2003dii.
Hadii habeen danbe ay Bayern Munich ku guuleysato Champions League waxa uu u noqon doonaa koobkoodii 5aad ee koobka kooxaha horyaalada qaarada Yurub, iyagoo sidoo kale noqon doona kooxdii ugu horeysay ee garoonkooda ku qaada intii koobkan loo bixiyay Champions League.
Hadii habeen danbe ay Chelsea ku guuleysato Champions League, waxa ay u noqon doontaa markii ugu horeysay ee ay kor u qaadaan koobkaan intii ay jireen oo dhan, waxaana ay noqon doonaan kooxdii ugu horeysay ee London geysa Champions League.
Labada kooxood wadar ahaan waxaa ganaax kaga maqan 6 ciyaaryahan.
Hadaba habeen danbe yaa loo caleemo saari doonaa koobka Champions League, Bayern Munich mise Chelsea?
Ka qeyb qaado codbixinta hoose islamarkaana waxaan natiijada codbixintiina soo bandhigi doonaa berrito hadii Eebe idmo. Sidoo kale fekerkaaga ku soo qor qeybta hoose ee ferkradaha.